Google.com.mm မှာ Zawgyi font ရော, Unicode ရောအဆင်ပြေပြေဖတ်နိုင်ရေးနိုင်ဖို့ - MYSTERY ZILLION
Google.com.mm မှာ Zawgyi font ရော, Unicode ရောအဆင်ပြေပြေဖတ်နိုင်ရေးနိုင်ဖို့
April 2013 edited May 2013 in Daily Life
www.google.com.mm မှာ သုံးထားတဲ့စာသားတွေက unicode ပါ။အဲ့အတွက် zawgyi ကိုပဲအမြဲတမ်းသုံးတဲ့ကျနော်တို့အတွက် font2ခုလုံးပေါ်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။
အခုကျနော်ပြောမယ့် နည်းလမ်းက zawgyi ကော unicode ကောကို font setting
မပြောင်းပဲ နဲ့ အဆင်ပြေပြေဖတ်နိုင်ဖို့ပါ။ လိုအပ်တာကတော့
Myanmar3font ( http://www.myanmarlanguage.org/sites/default/files/mm3-multi-os.ttf... )
အရင်ဆုံး myanmar3font ကိုdownloadချပါ။ install လုပ်ပါ။
ပြီးရင် Firefox ကို install လုပ်ပြီး open ပါ။
အရင်ဆုံး Font setting ကို default အတိုင်းထားရပါမယ်။အဲ့အတွက် Tools>Options>Content ထဲက
Font setting မှာ default font ကို TimeNewRomance ထားပေးပါ။
Advance မှာ proportional ကို Serif / Serif ကို Times New Roman ။
San-serif ကို Arial / Monospace ကို Courier New ထားပါ။
Default charcter encoding ကို Western(ISO-8859-1) ထားပါ။
ဟုတ်မဟုတ်အရင်စစ်ပါ။မှန်တယ်ဆိုရင် ok နဲ့ထွက်ပါ။GreaseMonkey addon သွင်းရပါမယ် အဲ့အတွက်
firefox ရဲ့ tools > addon ကိုသွားပါ။Get addon ကိုရွေးပြီး search box မှာ GreaseMonkey လို့ရိုက်ပါ။
ပြီးလျှင် install လုပ်ပါ။ Firefox ကို Restart လုပ်ပါ ။ firefox တက်လာရင် https://userscripts.org/scripts/show/103745 ကိုသွားပါ။ညာဘက်နားမှာ Install ဆိုတဲ့အစိမ်းရောင် button လေးရှိပါတယ်။
အဲ့ဒါကို နှိပ်ပါ။ ခနစောင့်ပါ။ pop-up window တခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
install ကိုနှိပ်ပါ။ MyanmarFontTagger Successfully Installed ဆိုတဲ့မျောက်ပုံလေးနဲ့စာသားလေးပေါ်လာရင်အဆင်ပြေပါပြီ။
http://www.google.com.mm/ ကိုသွားပါ။ မြန်မာဘာသာ ကိုရွေးပါ။
နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ firefox ကိုဖွင့်ပါ။
about:config ကို address bar မှာရိုက်ပြီး Enter2ချက်နှိိပ်ပေးပါ။
search box မှာ font.name.sans-serif.x-unicode လို့ရိုက်ပါ။
တွေ့လျှင် click 2ချက်နှိပ်ပြီး Arial ကိုဖြတ်ပါ။ ok နှိပ်ပါ။
နောက်တခုက font.name.serif.x-unicode လို့ search box မှာရှာပါ။
double click နှိပ်ပြီး TimeNewRomance ကို Zawgyi-one လို့ပြောင်းပြီး ok နှိပ်ပါ။
zawgyi နဲ့ တခုခုရှာကြည့်ပါ။ ဥပမာ မြန်မာ လို့ရှာကြည့်ပါ။
Zawgyi ကော် unicode ကော်အားလုံးအဆင်ပြေပြေမြင်ရတာတွေ့ရပါလိမ့် မယ်။
မရရရင် Firefox ကို Restart လုပ်ကြည့်ပါ။အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျ။
@firefox , please use unicode. We are not allow zawgyi.
I can't load the userscript page.
whenever i open, it said "
- If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.
http://userscripts-mirror.org/scripts/show/103745 ကို သွားကြည့်ပါ။
နောက်ပြီးတော့ Tagu ကို စမ်းကြည့်ရင်လည်း ရပါတယ်။
တန်ခူးက ရေးထားတာ ကြာပြီဆိုတော့ အလုပ်မလုပ်ခဲ့ရင် ကျွန်တော့် ကို ပြောနိုင်ပါတယ်။
တန်ခူးကတော့ google.com မှာတော့ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
Error: node.className.indexOf is notafunction
I installed the userscript but can't see the fonts clearly (zawgyi as well as myanmar unicode).
but if i stopped the loading page before it stop, i can see clearly.
P.S. sorry for bad english.. can't type unicode.
ရပြီခင်ဗျ ကျေးဇူးပါ။ နို့မို့ဆို MZ မှာ Myanmar3 ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ ကျန်တဲ့ Tab တွေမှာစာတွေက ပေါက်ကရတွေဖြစ်ကုန်ရော။ အခုတော့ အဆင်ပြေသွားပြီ။
ယူနီစလုံးကို ပါးပါးလေးပေါ်အောင် ပြုပြင်ပြီး Google maps မှာ မြန်မာအသံ ထည့်ပေးကြပါ။
January 19 Registered Users